Hindiya oo 'duqeysay mintidiinta gobolka Kashmir' - BBC News Somali
Hindiya waxay sheegtay inay xalay duqeysay xadka ay labada waddan ku muransan yihiin iyadoo bartilmaameedkeedu ahaa wax ay ugu yeertay goobo ay argagixisadu ka soo weerarto.
Waddamada Hindiya iyo Pakistan siyaabo aad u kala duwan ayay uga hadleen dhibaatooyinkan la sheegay inay dhaceen.
Waxaa jiray khasaare weyn oo weerarkaas ka dhashay ayuu sheegay agaasimaha hawl gallada milateriga Hindiya. Laakiin isla markiiba Pakistan ayaa soo jawaabtay si ay sheegashadaas u beeniso. Qof u hadlay milateriga dowladda Pakistan waxaa uu sheegay in dhacdooyinkaasi ay ahaayeen oo keliya madaafiic ay si joogto ah xadka labada dhinac isu-weydaarsadaan.
Laba askari oo reer Pakistan ah ayaa ku dhintay laakiin, afhayeenku waxaa uu sheegay, in fikradda ah in la qaaday weerarro bartilmaameed leh ay tahay marin habaabin ay Hindiya si ula kac ah u abuureyso si ay saameyn been ah ugu yeesho.
Ra'iisal wasaaraha Pakistan, Nawaz Sharif, waxaa uu si kastaba ha ahaatee cambaareeyay wax uu ugu yeeray weerarro gardarro ah, isagoo sheegay in ciidammada Pakistan ay awood buuxda u leeyihiin inay dhulkooda ka difaacaan weerarka Hindya.
Xiisadda ka dhex aloosan labada waddan ee quwadda nukliyeerka ku hubaysan durbadiiba meel sare ayay gaartay, taasoo la xiriirta weerar koox mintidiin ah ay ku qaadeen saldhig ciidammada waddanka Hindiya ay ku leeyihiin gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir horraantii bishan oo ay ku dhinteen 18 askari oo Hindi ah.